Maxay Qabteen? | Saint Paul Historical
3M waxay si joogta ah u horumarisay mishiino iyo Teknoolajiga si loo horumariyo, loo soo saaro, oo loo iibiyo alaabteeda. Taas ka sakow, waxay ku tiirsanayd dadkeeda si shaqada loo sameeyo. Qaar ka mid ah shaqooyinka in dheeraad ah ma jiraan ama waxaa si buuxda looga dhigay otomaatig.
Ilaaliyaha Waaxda Macdanta
Emil Anderson waxa uu u beddelay noocyo badan o baaleesyada ah daasado waa wayn una beddeshay kiishashka kaydka ooka yaryar. Ka dib waxa uu summad ugu sameeyay kiishashka nooca macdanta iyo cabbirka dhagaxa. Sax ahaanshaha muddada nidaamka waxa uu ahaa muhiim si loo sameeyo baaleesyo isku mid ah.
John Rosner waxa uu ka shaqeeyay Mishiinka Samaynta Lambar. 1 mishiinka samaynta duubabka waa wayn ee xabagta iyo baaleeska. Qalabka waa in si isku mid ah loo duubaa sidii qayb nidaamka maamulka tayada ah.
Jeannette Olson waxay ka shaqaynaysay beddelka baaleeska, waaxda jarista duubka. Mishiino waa wayn ayaa jara baaleeska, laakiin Jeannette iyo saaxiibadeeda shaqadu waxay qaadeen qaybaha alaabta oo rasooyin 50 ah kana qaadeen suunka qaadaha oo kolba dhinac u rogeen markaas waxaa lagu la gelinayaan qaybaha lagu cabbaynayo. Shaqadan waxay sidoo kale qayb ka ahayd nidaamka maamulka tayada.
Ruth Perkovic waxay diiwaangeliyeen oo wadeen faylasha qoraalada shirkada ee nidaaka kaadhkan markaas qadarka iyo noocyada alaabta 3M waxaa laga tixraaci karaa bakhaarada shirkada. Nidaamku waxa uu caawiyay maamulka wax soo saarka, kaydinta, iyo dalabaadka macmiilka.
Habbaynta Shaqaalaha Mishiinka
Scott Thiele waxa uu ku isticmaalay mashiinka habbaynta IBM waxda baadhidataanka macmiilka. Xogta macmiilka ee dhul kastoo iib waxaa lageliyay kaadhka daloola kaas oo la dhex mariyay mashiinka habbaynta. Warbixinta natiijada ah waxay bixisay macluumaad xisaabeed oo waaxaha shirkada kala duwan iyo hawlagalada.
Emil Anderson, Ilaaliyaha Waaxda Macdanta: Emil Anderson waxa uu u beddelay noocyo badan o baaleesyada ah daasado waa wayn una beddeshay kiishashka kaydka ooka yaryar. Ka dib waxa uu summad ugu sameeyay kiishashka nooca macdanta iyo cabbirka dhagaxa. Sax ahaanshaha muddada nidaamka waxa uu ahaa muhiim si loo sameeyo baaleesyo isku mid ah. ~ Source: Minnesota Historical Society
John Rosner, Ninka duubista: John Rosner waxa uu ka shaqeeyay Mishiinka Samaynta Lambar. 1 mishiinka samaynta duubabka waa wayn ee xabagta iyo baaleeska. Qalabka waa in si isku mid ah loo duubaa sidii qayb nidaamka maamulka tayada ah. ~ Source: Minnesota Historical Society
Jeanette Olson, Qabtaha- Cabeeyaha: Jeannette Olson waxay ka shaqaynaysay beddelka baaleeska, waaxda jarista duubka. Mishiino waa wayn ayaa jara baaleeska, laakiin Jeannette iyo saaxiibadeeda shaqadu waxay qaadeen qaybaha alaabta oo rasooyin 50 ah kana qaadeen suunka qaadaha oo kolba dhinac u rogeen markaas waxaa lagu la gelinayaan qaybaha lagu cabbaynayo. Shaqadan waxay sidoo kale qayb ka ahayd nidaamka maamulka tayada. ~ Source: Minnesota Historical Society
Ruth Perkovic, Karaaniga Kardex: Ruth Perkovic waxay diiwaangeliyeen oo wadeen faylasha qoraalada shirkada ee nidaaka kaadhkan markaas qadarka iyo noocyada alaabta 3M waxaa laga tixraaci karaa bakhaarada shirkada. Nidaamku waxa uu caawiyay maamulka wax soo saarka, kaydinta, iyo dalabaadka macmiilka. ~ Source: Minnesota Historical Society
Scott Thiele, Habbaynta Shaqaalaha Mishiinka: Scott Thiele waxa uu ku isticmaalay mashiinka habbaynta IBM waxda baadhidataanka macmiilka. Xogta macmiilka ee dhul kastoo iib waxaa lageliyay kaadhka daloola kaas oo la dhex mariyay mashiinka habbaynta. Warbixinta natiijada ah waxay bixisay macluumaad xisaabeed oo waaxaha shirkada kala duwan iyo hawlagalada. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Maxay Qabteen?,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/361.